people Nepal » बलिउड स्टारहरुको डिभोर्स, कसले कति रकम लिए ? बलिउड स्टारहरुको डिभोर्स, कसले कति रकम लिए ? – people Nepal
बलिउड स्टारहरुको डिभोर्स, कसले कति रकम लिए ?
३१ वैशाख – बलिउड- लव अफयेर, विवाह र डिभोर्सका कारण चर्चामा आउने बलिउड स्टारहरुको चर्चा पछिल्लो समय केही ज्यादा नै हुने गरेको छ । उनीहरुको महंगो डिभोर्सको कारण पछिल्लो समय बलिउडमा ठुलो चर्चा हुने गरेको छ ।
बलिउडका मंहगा डिभोर्स
आदित्य चोपडा र पायल खन्ना
निर्देशक आदित्य चोपडा रानी मुखर्जीको मायामा परेपछि श्रीमति पायललाई छोड्न ठुलै संघर्ष गर्नुपर्यो । उनीहरुबीच लामो समय कोर्टमा मुद्धा चल्यो । पायलले धेरै नै पैसा मागेपछि उनीहरुबीच सहमति हुन सकेको थिएन । मिडिया रिपोर्टका अनुसार यस डिभोर्सका लागि पायलले ठुलो रकम लिएकी थिइन् । तर, कति भने खुलाइएको थिएन ।
आमिर खान र रीना दत्त
जब किरण राओ आमिर खानको जीवनमा आइन् तब रीनालाई डिभोर्स दिने निर्णय आमिरले गरे । यो जोडीको विवाह सन् १९८६ मा भएको थियो । सन् २००२ मा यो जोडीको डिभोर्स भएको थियो । रीनाले आमिरसँग छुट्टिन ५० करोड मागेकी थिइन् ।
सैफ अली खान र अमृता सिंह
यो जोडीमा उमेरको अन्तरको केही ज्यादा नै थियो । दुवैको वैवाहिक सम्बन्ध १३ वर्षसम्म चल्यो । तर, अन्तत डिभोर्स नै भयो । अन्तत अमृतालाई सेफले आफ्नो आधी सम्पत्ति दिन पर्यो ।
रितिक रोशन र सुजैन खान
यो जोडी सन् २०१३ मा अलग्गिएको थियो । यो जोडी सानैदेखिका साथी पनि थिए । रितिकसँग डिभोर्स गर्न ४०० करोड मागेकी सुजैनले ३८० करोडमा चित्त बुझाएकी थिइन् । यो नै बलिउडको सबैभन्दा महँगो डिभोर्स रहेको छ ।
करिश्मा कपुर र संजय कपुर
यो जोडीको डिभोर्स भइसकेको छ । करिश्माले डिभोर्स पश्चात संजयको पिताको मुम्बईमा रहेको बंगला र बच्चाको रेखदेखका लागि १० लाख प्रत्येक महिनाको खर्च दिने सहमति भएको थियो । करिष्माले १४ करोड रुपैया लिएकी थिइन् ।